डा.केसीको जीवन रक्षाकाे माग गर्दै काँग्रेस निकट पेशागत संघ, संस्थाको प्रदर्शन | ईमाउण्टेन समाचार
डा.केसीको जीवन रक्षाकाे माग गर्दै काँग्रेस निकट पेशागत संघ, संस्थाको प्रदर्शन
माघ १७, २०७५ पढ्न ३ मिनेट
काठमाडौं, १७ माघ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस समर्थित पेशागत संघ, संस्थाहरुले आमरन अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस समर्थित पेशागत संघ, संस्थाहरुले बिहीबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ¥यालीसहितको प्रदर्शन गर्दै डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले डा. केसीसँग गरिएको सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी पनि लगाएका थिए । डा. केसीको माग तत्काल सम्बोधन गरी उनको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न ढिलाई नगर्न पनि काँग्रेस निकट पेशागत संघ, संस्थाहरुले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनमा काँग्रेस निकट चिकित्सक, वकील, पत्रकार, मानव अधिकारवादी, बुद्धिजीविलगायतको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । आफूसँग गरिएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि डा. केसीले १६ औं पटक आमरन अनसन बसेको बिहीबार २३ औं दिन पुगेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. केसीले जीवनको समेत प्रवाह नगरि गरेको सत्याग्रहप्रति सरकारले कुनै चाँसो नदिएको भन्दै काँग्रेस निकट पेशागत संघ, संस्थाहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित
प्रहरीको ‘सेफ्टी पिन’ अपरेसन प्रभावकारी भएन
डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै युवाद्वारा धर्ना तथा प्रदर्शन
निषेधित क्षेत्र तोड्दै सिंहदरबार अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन
डा. केसीको समर्थनमा माइतिघरमा प्रदर्शन